ကားတစ်စီးမဝယ်ယူမီ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရာ (Test Drive) တွင် သိထားသင့်သည့်အချက်များ
အကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ Test Drive လုပ်ကြည့်တာပါ။
Test Drive ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဝယ်ယူမောင်းနှင်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ ကားတစ်စီးကို Test Drive လုပ်ချိန်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေတာကြောင့်ရယ်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာတွေ များလွန်းနေတာကြောင့်ရယ် အရေးကြီးတာတွေကို မေ့သွားတတ်တယ်။ အဓိက ကတော့ ကိုယ်ဝယ်မယ့်ကားဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ ဒီ Test Drive မှာ ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ သတိပြုစရာ အချက်ကလေးတွေ သိထားတော့ ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်တာပေါ့။
ဒီနေရာမှာ အကြံပေးလိုတာတစ်ခုက ကား အမျိုးအစားတစ်ခုစီကို တစ်နေရာစီသွားပြီး Test Drive လုပ်မယ့်အစား၊ ကားမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ ပြပွဲမျိုးမှာ Test Drive သွားလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာပါ။ အမျိုးအစားထက်စာရင် ကိုယ့်နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်ညီခြင်းက ပိုလို့အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား?
Test Drive သွားတော့မယ်ဆိုရင် မိသားစုဝင်တွေ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို တပါတည်း ခေါ်သွားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ ထုထည်ကြီးပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို စစ်ဆေးဖို့ဆိုရင် မျက်လုံးအပိုတွေ ပါလာတာဟာ ဘယ်တော့မှ မမှားယွင်းဘူး။ နောက်တစ်ချက်က စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရာမှာလည်း လူအများနဲ့တစ်ခါတည်း Test Drive လုပ်နိုင်တာပေါ့။
ကိုယ့်အတွက် ဘာအရေးပါသလဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါ
ကိုယ့်ရဲ့ ကားအသစ်အတွက် လိုအပ်တာနဲ့ လိုချင်တာ စာရင်းပြုထားပါ။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့ ပိုလိုတာလား? ခပ်ကြမ်းကြမ်းမောင်းဖို့ လိုအပ်တာလား? အတွင်းခန်းမှာ ဘာတွေပါဖို့ လိုအပ်မှာလဲ? ကိုယ့်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲက ကားအတွင်းခန်းပုံစံက ဘယ်လိုလဲ? ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာတွေကို ကြိုတင် စဉ်းစားထားသင့်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ ခရီးလမ်းကြောင်းတွေ စဉ်းစားထားပါ
ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် ကားမောင်းနှင်မယ့် လမ်းကြောင်းကို ကြိုတင်စဉ်းစားပြီး အစီအစဉ်ချထားတာဟာ ဘယ်လိုကားမျိုးနဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်မလဲဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်း သိရှိစေနိုင်တယ်။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဘယ်လိုအင်္ဂါရပ်တွေပါလာရင် ကိုယ့်အတွက်သင့်တော်မယ်ဆိုတာကို တခါတည်း သိသွားနိုင်သေးတယ်။ အမြဲလိုလို ခရီးဝေးမောင်းမှာလား၊ ကိုယ့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်က လမ်းတွေဟာ ဆိုးလား၊ မြို့တွင်းမှာပဲ အမြဲတမ်းမောင်းနှင်မှာလား? အဖြေထုတ်ထားသင့်တယ်။
Test Drive ကနေ မဆင်းမီ အချိန်ပိုယူပါ
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ကားကိုတွေ့ပြီ။ အတွင်းခန်းနဲ့ အပြင်ပိုင်းကို ကြည့်ရှုပြီးပြီ။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်တာတွေလည်း လုပ်ပြီးပြီ ဆိုပါတော့။ လောလော လောလောနဲ့ ချက်ခြင်းကြီးမဆင်းလိုက်ပါနဲ့ဦး။ ကိုယ်ဝယ်စီးတော့မယ့် ကားတစ်စီးရဲ့ အငွေ့အသက်ကို ခံစားပါ။ အဝင်အထွက်ကို သုံးလေးငါးခါ လုပ်ကြည့်ပါ။ သက်တောင့်သက်သာရှိ/မရှိ ခံစားကြည့်ပါ။ ကားမှာပါဝင်တဲ့ Accessories တွေကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။ စမ်းသပ်မောင်းနှင် နေစဉ်မှာလည်း အသုံးပြုကြည့်ပါ။ ရေဒီယိုအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်သလား၊ Air-con ကိုရော? စတာတွေကို မောင်းနှင်ရင်းလည်း စမ်းသပ်ပါ။ ခြေနင်းတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေ/မပြေကိုလည်း မကြာခဏစမ်းကြည့်သင့်တယ်။
အရှိန်မြှင့်ကြည့်ပါ။ အရှိန်လျော့ကြည့်ပါ။ ကျော်တက်ကြည့်ပါ။ Parking ထိုးကြည့်ပါ။ Engine Power ဘယ်လိုရှိမလဲ စမ်းသပ်ပါ။ ကိုယ်လိုတဲ့ အမြန်နှုန်းထိ ရ/မရ စစ်ဆေးပါ။ အရှိန် အနိမ့်/အမြင့် အပြောင်းအလဲမှာ ချောမွေ့မှုရှိ/မရှိကိုလည်း စစ်ဆေးဖို့မမေ့ပါနှင့်။
ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားမှုကိုလည်း ထည့်သွင်း တန်ဖိုးဖြတ်ပါ
ကား steering က ကိုယ်နဲ့ အစဉ်ပြေလား။ များများအသုံးပြုကြည့်ပါ။ အကွေ့အကောက်တွေမှာ ဘယ်လိုနေမလဲ။ ရှာဖွေစူးစမ်းပါ။ ဘယ်/ညာ ကွေ့ရာမှာ ကားရဲ့ တုန့်ပြန်မှု ဘယ်လိုရှိမလဲ။ မောင်းနှင်ကြည့်ပါ။ ထိုင်ခုံတွေကရော သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ရဲ့လား? နောက်ကြည့်မှန်တွေကရော၊ ကိုယ့်အတွက် ချိန်ရ၊ ပြုရ အဆင်ပြေရဲသလား? ဘယ်လိုခံစားရလဲ? ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ပါ။
ဘရိတ်ဟာ ကားတစ်စီးအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနှင့်။ အရှိန်ပြင်းပြင်း မောင်းနှင်ပြီး နင်းကြည့်ပါ။ အရှိန်လျော့မောင်းနှင်ပြီးနင်းကြည့်ပါ။ ဘရိတ်ခပ်ပြင်းပြင်းနင်းတဲ့အချိန် ဘယ်/ညာ ဆွဲ/မဆွဲ စစ်ဆေးပါ။ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပါတ်ထားတဲ့ လူအပြည့်တင်ပြီး ဘရိတ်ကို စောင့်နင်းကြည့်ပါ။ ပြီးရင် အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။
ကားတစ်စီးဆိုတာ အရှေ့ကိုဘဲ မောင်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ရပ်နားတဲ့အခါမှာ Parking ထိုးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။ ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့်ကားဟာ Parking ထိုးတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာကိုလည်း စမ်းသပ်ရမှာပါ။ Parking အပြိုင်ထိုးတာမျိုး၊ နောက်ဆုတ်ပြီး ထိုးတာမျိုးတွေကို နှစ်ခေါက်ထက်မနည်း စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကားတစ်စီးမောင်းနှင်ရာမှာ နေ့ပိုင်းနဲ့ ညပိုင်းဟာ ခြားနားတတ်တယ်။ နေရောင်အလင်းနဲ့ နေ့ပိုင်းမောင်းနှင်တာဟာ မီးတွေကိုအားပြုပြီး ညပိုင်းမောင်းနှင်တာမျိုးနဲ့ မတူပါဘူး။ နေ့ဘက်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ကားကိုတွေ့ပြီဆိုရင် အဲဒီကားကိုယ်ဘဲ ညဘက် စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ နေအလင်း ပျောက်တဲ့အထိ ကျင်းပပေးတဲ့ Test Drive ပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ မသွားမဖြစ် သွားရောက်စမ်းသပ်ကြည့်သင့်တာပေါ့။
Test Drive တစ်ခုမှာ ကားတစ်စီးစမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး လိုအပ်မယ့်အချိန်ဟာ မိနစ် ၃ဝ လောက်ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် Test Drive ပွဲတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ ၁ နာရီ ၂ နာရီ အချိန်ပေးရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ လာသင့်တာမျိုးပေါ့။ ကားတစ်စီးကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြီးရင်လည်း ကိုယ်ရဲ့ စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုအပေါ် စာနဲ့ ချရေးတာမျိုး လုပ်သင့်ပါသေးတယ်။ ဒါမှ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး ကောင်းကောင်းကြီး နှိုင်းယှဉ်လို့ရမှာလေ။ အကောင်းဆုံးကတော့ အချိန်နေ့ဝက်လောက်ပေးပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ကား အနည်းဆုံး သုံးလေးငါးစီးကို မောင်းနှင်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ညပိုင်းတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီး ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးကားကို ထပ်မံမောင်းနှင်ကြည့်ပါ။
Test Drive မှာ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးကားကို ရှာဖွေနိုင်ကြပါစေ။
အကောငျးဆုံးတဈခုကတော့ Test Drive လုပျကွညျ့တာပါ။
Test Drive ဘယျလိုလုပျမလဲ?
ဝယျယူမောငျးနှငျမယျ့သူတှအေနနေဲ့ ကားတဈစီးကို Test Drive လုပျခြိနျမှာ စိတျလှုပျရှားနတောကွောငျ့ရယျ၊ ထညျ့သှငျးစဉျးစားစရာတှေ မြားလှနျးနတောကွောငျ့ရယျ အရေးကွီးတာတှကေို မေ့သှားတတျတယျ။ အဓိက ကတော့ ကိုယျဝယျမယျ့ကားဟာ ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝနထေိုငျမှုပုံစံနဲ့ ကိုကျညီမှု ရှိ/မရှိ ဒီ Test Drive မှာ ဆုံးဖွတျရမှာပါ။ ဆုံးဖွတျဖို့အတှကျ အောကျဖျေါပွပါ သတိပွုစရာ အခကျြကလေးတှေ သိထားတော့ ပိုပွီး ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံနဲ့ မှနျမှနျကနျကနျ ဆုံးဖွတျနိုငျတာပေါ့။
ဒီနရောမှာ အကွံပေးလိုတာတဈခုက ကား အမြိုးအစားတဈခုစီကို တဈနရောစီသှားပွီး Test Drive လုပျမယျ့အစား၊ ကားမြိုးစုံပါဝငျတဲ့ ပွပှဲမြိုးမှာ Test Drive သှားလုပျသငျ့တယျဆိုတာပါ။ အမြိုးအစားထကျစာရငျ ကိုယျ့နထေိုငျမှုပုံစံနဲ့ လိုကျဖကျညီခွငျးက ပိုလို့အရေးကွီးတယျ မဟုတျလား?
Test Drive သှားတော့မယျဆိုရငျ မိသားစုဝငျတှေ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို တပါတညျး ချေါသှားနိုငျရငျ အကောငျးဆုံးပါ။ ထုထညျကွီးပွီး တနျဖိုးရှိတဲ့ အရာဝတ်ထုတှကေို စဈဆေးဖို့ဆိုရငျ မကျြလုံးအပိုတှေ ပါလာတာဟာ ဘယျတော့မှ မမှားယှငျးဘူး။ နောကျတဈခကျြက စမျးသပျမောငျးနှငျရာမှာလညျး လူအမြားနဲ့တဈခါတညျး Test Drive လုပျနိုငျတာပေါ့။
ကိုယျ့အတှကျ ဘာအရေးပါသလဲ ဆုံးဖွတျထားပါ
ကိုယျ့ရဲ့ ကားအသဈအတှကျ လိုအပျတာနဲ့ လိုခငျြတာ စာရငျးပွုထားပါ။ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈဖို့ ပိုလိုတာလား? ခပျကွမျးကွမျးမောငျးဖို့ လိုအပျတာလား? အတှငျးခနျးမှာ ဘာတှပေါဖို့ လိုအပျမှာလဲ? ကိုယျ့စိတျကူးယဉျအိပျမကျထဲက ကားအတှငျးခနျးပုံစံက ဘယျလိုလဲ? ကိုယျလိုခငျြတာနဲ့ လိုအပျတာတှကေို ကွိုတငျ စဉျးစားထားသငျ့တယျ။
ဖွဈနိုငျခွေ ခရီးလမျးကွောငျးတှေ စဉျးစားထားပါ
ကိုယျ့ရဲ့ နေ့စဉျ ကားမောငျးနှငျမယျ့ လမျးကွောငျးကို ကွိုတငျစဉျးစားပွီး အစီအစဉျခထြားတာဟာ ဘယျလိုကားမြိုးနဲ့ အဆငျပွခြောမှေ့နိုငျမလဲဆိုတာကို အကွမျးဖငျြး သိရှိစနေိုငျတယျ။ စမျးသပျမောငျးနှငျတဲ့အခြိနျမှာလညျး ဘယျလိုအငျ်ဂါရပျတှပေါလာရငျ ကိုယျ့အတှကျသငျ့တျောမယျဆိုတာကို တခါတညျး သိသှားနိုငျသေးတယျ။ အမွဲလိုလို ခရီးဝေးမောငျးမှာလား၊ ကိုယျ့အနီးပတျဝနျးကငျြက လမျးတှဟော ဆိုးလား၊ မွို့တှငျးမှာပဲ အမွဲတမျးမောငျးနှငျမှာလား? အဖွထေုတျထားသငျ့တယျ။
Test Drive ကနေ မဆငျးမီ အခြိနျပိုယူပါ
ကိုယျလိုခငျြတဲ့ကားကိုတှေ့ပွီ။ အတှငျးခနျးနဲ့ အပွငျပိုငျးကို ကွညျ့ရှုပွီးပွီ။ စမျးသပျမောငျးနှငျတာတှလေညျး လုပျပွီးပွီ ဆိုပါတော့။ လောလော လောလောနဲ့ ခကျြခွငျးကွီးမဆငျးလိုကျပါနဲ့ဦး။ ကိုယျဝယျစီးတော့မယျ့ ကားတဈစီးရဲ့ အငှေ့အသကျကို ခံစားပါ။ အဝငျအထှကျကို သုံးလေးငါးခါ လုပျကွညျ့ပါ။ သကျတောငျ့သကျသာရှိ/မရှိ ခံစားကွညျ့ပါ။ ကားမှာပါဝငျတဲ့ Accessories တှကေို အသုံးပွုကွညျ့ပါ။ စမျးသပျမောငျးနှငျ နစေဉျမှာလညျး အသုံးပွုကွညျ့ပါ။ ရဒေီယိုအလှယျတကူဖှငျ့နိုငျသလား၊ Air-con ကိုရော? စတာတှကေို မောငျးနှငျရငျးလညျး စမျးသပျပါ။ ခွနေငျးတှနေဲ့ ကိုယျနဲ့ အဆငျပွေ/မပွကေိုလညျး မကွာခဏစမျးကွညျ့သငျ့တယျ။
အရှိနျမွှငျ့ကွညျ့ပါ။ အရှိနျလြော့ကွညျ့ပါ။ ကျြောတကျကွညျ့ပါ။ Parking ထိုးကွညျ့ပါ။ Engine Power ဘယျလိုရှိမလဲ စမျးသပျပါ။ ကိုယျလိုတဲ့ အမွနျနှုနျးထိ ရ/မရ စဈဆေးပါ။ အရှိနျ အနိမျ့/အမွငျ့ အပွောငျးအလဲမှာ ခြောမှေ့မှုရှိ/မရှိကိုလညျး စဈဆေးဖို့မမေ့ပါနှငျ့။
ကိုယျ့ရဲ့ ခံစားမှုကိုလညျး ထညျ့သှငျး တနျဖိုးဖွတျပါ
ကား steering က ကိုယျနဲ့ အစဉျပွလေား။ မြားမြားအသုံးပွုကွညျ့ပါ။ အကှေ့အကောကျတှမှော ဘယျလိုနမေလဲ။ ရှာဖှစေူးစမျးပါ။ ဘယျ/ညာ ကှေ့ရာမှာ ကားရဲ့ တုနျ့ပွနျမှု ဘယျလိုရှိမလဲ။ မောငျးနှငျကွညျ့ပါ။ ထိုငျခုံတှကေရော သကျတောငျ့သကျသာဖွဈရဲ့လား? နောကျကွညျ့မှနျတှကေရော၊ ကိုယျ့အတှကျ ခြိနျရ၊ ပွုရ အဆငျပွရေဲသလား? ဘယျလိုခံစားရလဲ? ကိုယျ့ကိုကိုယျ မေးခှနျးထုတျပါ။
ဘရိတျဟာ ကားတဈစီးအတှကျ အလှနျအရေးကွီးတဲ့ ကဏ်ဍမှာ ပါဝငျတယျဆိုတာ မမေ့ပါနှငျ့။ အရှိနျပွငျးပွငျး မောငျးနှငျပွီး နငျးကွညျ့ပါ။ အရှိနျလြော့မောငျးနှငျပွီးနငျးကွညျ့ပါ။ ဘရိတျခပျပွငျးပွငျးနငျးတဲ့အခြိနျ ဘယျ/ညာ ဆှဲ/မဆှဲ စဈဆေးပါ။ ထိုငျခုံခါးပတျပါတျထားတဲ့ လူအပွညျ့တငျပွီး ဘရိတျကို စောငျ့နငျးကွညျ့ပါ။ ပွီးရငျ အခွအေနကေို စဈဆေးပါ။
ကားတဈစီးဆိုတာ အရှေ့ကိုဘဲ မောငျးရတာမြိုးမဟုတျဘူး။ ရပျနားတဲ့အခါမှာ Parking ထိုးဖို့လိုတယျဆိုတာကို သတိရပါ။ ကိုယျဝယျယူမယျ့ကားဟာ Parking ထိုးတဲ့အခြိနျမှာ ဘယျလိုနသေလဲဆိုတာကိုလညျး စမျးသပျရမှာပါ။ Parking အပွိုငျထိုးတာမြိုး၊ နောကျဆုတျပွီး ထိုးတာမြိုးတှကေို နှဈခေါကျထကျမနညျး စမျးသပျကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
ကားတဈစီးမောငျးနှငျရာမှာ နေ့ပိုငျးနဲ့ ညပိုငျးဟာ ခွားနားတတျတယျ။ နရောငျအလငျးနဲ့ နေ့ပိုငျးမောငျးနှငျတာဟာ မီးတှကေိုအားပွုပွီး ညပိုငျးမောငျးနှငျတာမြိုးနဲ့ မတူပါဘူး။ နေ့ဘကျစမျးသပျပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့စိတျကွိုကျကားကိုတှေ့ပွီဆိုရငျ အဲဒီကားကိုယျဘဲ ညဘကျ စမျးသပျမောငျးနှငျကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ နအေလငျး ပြောကျတဲ့အထိ ကငျြးပပေးတဲ့ Test Drive ပှဲမြိုးဆိုရငျတော့ မသှားမဖွဈ သှားရောကျစမျးသပျကွညျ့သငျ့တာပေါ့။
Test Drive တဈခုမှာ ကားတဈစီးစမျးသပျမောငျးနှငျကွညျ့ဖို့အတှကျ အနညျးဆုံး လိုအပျမယျ့အခြိနျဟာ မိနဈ ၃ဝ လောကျရှိတာပါ။ ဒါကွောငျ့ Test Drive ပှဲတဈခုကိုသှားမယျဆိုရငျ အနညျးဆုံးတော့ ၁ နာရီ ၂ နာရီ အခြိနျပေးရမှာ အသအေခြာပါပဲ။ ကွိုတငျပွငျဆငျပွီးမှ လာသငျ့တာမြိုးပေါ့။ ကားတဈစီးကို စမျးသပျမောငျးနှငျပွီးရငျလညျး ကိုယျရဲ့ စမျးသပျမောငျးနှငျမှုအပျေါ စာနဲ့ ခရြေးတာမြိုး လုပျသငျ့ပါသေးတယျ။ ဒါမှ တဈစီးနဲ့တဈစီး ကောငျးကောငျးကွီး နှိုငျးယှဉျလို့ရမှာလေ။ အကောငျးဆုံးကတော့ အခြိနျနေ့ဝကျလောကျပေးပွီး ကိုယျနဲ့ကိုကျညီတဲ့ ကား အနညျးဆုံး သုံးလေးငါးစီးကို မောငျးနှငျကွညျ့ပါ။ ပွီးရငျ ညပိုငျးတဈခေါကျပွနျလာပွီး ကိုယျအကွိုကျဆုံးကားကို ထပျမံမောငျးနှငျကွညျ့ပါ။
Test Drive မှာ ကိုယျအကွိုကျဆုံးကားကို ရှာဖှနေိုငျကွပါစေ။